40 guuradii Af-Soomaaliga oo lagu xusay magaalada Nairobi + Sawirro. - Caasimada Online
Home Warar 40 guuradii Af-Soomaaliga oo lagu xusay magaalada Nairobi + Sawirro.
40 guuradii Af-Soomaaliga oo lagu xusay magaalada Nairobi + Sawirro.
Waxaa magaalada Nairobi lagu qabtay munaasabad si wayn loo soo agaasimay oo loogu dabaal dagayay sanadguuradii 40-aad ee ka soo Wareegtay Hirgalinta Qoraalka af Soomaaliga.
Xafladan oo si wayn loo soo agaasimay waxaa ka soo qeybgalay Aqoonyahano dad magic ku leh Qoraalka iyo sheekooyinka afka Somaliga oo uu ka mid ahaa axmed faarax Cali (Idaajaa).
Prof: Cabdilaahi ali Hiiray oo ugu horayn halkaas ka hadlay ayaa ka hadlay waxa laga soo maray afka Soomaaliga Qoraalkiisa iyo Hir galintiisa, waxa uuna kaga hadlay Aqoonyahanadii soo diyaariyay afka Soomaaliga.
“ afka Soomaliga waxa uu ahaa af dhibaato laga soo maray in la sameeyo ama la qoro oo dadka la baro in aan nahay Somali, Leh af u gaar ah”ayuu yiri Prof: Cabdilaahi ali Hiiray .
Fanaaniin ay ka mid ahaayeen Hodon afrika iyo fananka jooqle shire Jaamac cayaar Jecel ayaa halkaas ku soo bandhigay Heeso ku aadan Somaliga iyo Waxbarashada.
DR: Maxamed Cali kaastaro oo ka mid ahaa aqoonyahanadii ka hadlay halkaas ayaa waxa uu ku dheeraaday wax qabadkii iyo afka Somaliga.
“ Hir galinta Qoraalka afka Somaliga waxaa laga soo maray dhibaato badan, marka waxaan leeyahay manta waxaan nahay dad Somali ah leh Luqad u gaar ah far u gaar ah, waxaana arintaas ka soo shaqeeyay Aqoonyahandii”ayuu yiri DR: Maxamed Cali kaastaro.
“ waxaan arki jirnay ninka yaqaan af Somali ama Carabi oo la siiyo shilin oo markaas qoro Qoraalka sida uu u ahaa wax aan la heli Karin, marka shilin maalintii lagu siiyo oo aad Qorto dhowr Warqadood, waxaa Xiligaas ay ahayd lacag badan”ayuu mar kale Yiri DR: Maxamed Cali kaastaro.
Sidoo kale waxaa ka mid ahaa dadkii halkaas ka hadlay axmed faarax Cali (Idaajaa) oo ka mid ah dadka afka soomaaliga iyo Buugaagta lagu qiimeeyo.
“Qoraalka iyo Murtida Somalida isticmasho waxaa laga soo maray mar xalado kala duwan, Rag ayaa u Istaagay in afka Somaliga la Qoro la Aqriyo, marka buugaagtii afka Somaliga laga Guuriyay oo ay soo saari jirtay madbacada Qaranka, hada ma shaqayso marka maanta oo kale Waxay ahayd markii 40 guuradii ka soo wareegtay Hirgalinta Qoraalka af Soomaaliga, waana in gacanta lagu hayaa arintaas”ayuu yiri axmed faarax Cali (Idaajaa) oo ah nin ka mid ah Aqoonyahanada Somaliga sheekooyin aad u xiiso badana ka sheekeeya.
“maanta waan ognahay halka uu marayo iyo meesha uu ahaa 30 sano ka hor, waxaa laga yabaa in Erayo kale la helay ama aan af Somali ahayan, marka waa in afka Somaliga farta gacanta lagu hayaa oo aan la dayicin wixii dhibaatada ay ka soo mareen Aqoonyahanadii Soomaaliyeed ee qoray afka somaliga”ayuu markale yiri axmed faarax Cali (Idaajaa).
Ugu danbayntii waxaa halkaas ka mid ahaa dadkii ka hadlay axmed sh buraale oo ka sheekeeyay qorayaasha waxay ka faa’ideen Qoraalka afka Somaliga.